Duqa Muqdisho oo casho sharaf u sameeyay wefdi ka socda Dariiqada Suufiyada ee dalka Suudaan “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kulan casho ah oo maaulka gobalka banaadir ku sogootinayey wafdi ka socda dalalka Masar, Suudan iyo Turkiga oo ay ka qeybgaleen xidhibaanno iyo marti sharaf kale ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Kulankan ayaa ahaa mid lagu sagootinayay wafdiga oo u badnaa culimo kuwaasi oo maalihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho, waxaana markii ay soo gaareen xarunta maamulka Gobolka Banaadir ee degmada Heliwaa ay xerta Sheekh Muxudiin Celi ku soo dhaweeyeen digri salaan.
Sheekh Cubeyd Karaar oo hogaamiyay wafdiga ayaa maamulka gobolka Banaadir uga mahadceliyay soo dhaweynta ay u sameeyeen iyo socdaalkii ay ku yimaadeen caasimadda.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” oo ka hadlay kulanka ayaa culimada uga mahadceliyay booqashada ay ku yimaadeen Muqdisho, isagoo xusay in tani ay ka turjumeyso sida maamulka gobolka uu u doonayo in uu soo dhaweyn diiran u sameeyo wafuudda booqashada ku imaanaysa Muqdisho.
Xildhibaan Cabdiqaadir Macalin Nuur oo ugu dambeyntii kulanka ka hadlay ayaa uga mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir casuumaadda uu u fidiyay culimadan, isagoo tilmaamay inay xoogga saarayaan xoojinta xiriirka culimada Islaamka.